Hankany ve aho? , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Misy ny manao an'io. Ny sasany manao izany tampoka na tsy matahotra. Ny sasany manao azy amin'ny tanjona, noho ny lolompo. Ny ankamaroantsika dia manao izany isaky ny avy eo, isaky ny manao izany isika na an-kisendrasendra. Miezaka izahay tsy ho tratra raha manao zavatra izay fantatray fa tsy mety.
Miharihary izany rehefa mitondra fiara. Ho afa-mandositra ve aho raha mandalo io kamiao io? Ho afa-mandositra ve aho raha tsy mijanona kely amin'ny fijanonana aho na mbola mitondra fiara miaraka amin'ny mavo? Ho afa-mandositra ve aho raha mihoatra ny hafainganam-pandeha - Nandeha an-kaly avy hatrany aho?
Indraindray aho hiezaka ny tsy ho tratra rehefa mahandro na manjaitra. Tsy hisy hahamarika raha mampiasa zava-manitra hafa aho na raha nahita zavatra diso aho. Na manandrana mihinana sôkôla fanampiny izay tsy ankadino aho, na manantena aho fa tsy ho hita ny fangatahana mangatsiaka tsy hanao fanazaran-tena.
Moa ve isika manandrana mandositra ny zavatra ara-panahy amin'ny fanantenana fa tsy hahalala na tsy mijery azy ireo Andriamanitra? Mazava ho azy ny fahitan'Andriamanitra ny zava-drehetra, koa fantatsika fa tsy afaka miala amin'ny zavatra hafa rehetra isika. Moa tsy ny zavatra rehetra va ny fahasoavany?
Mbola eo foana izahay. Azontsika atao ny miady hevitra: afaka miala aho tsy hivavaka anio. Na: lasa lavitra aho amin'ny filazan'ity fifosana kely ity na mijery ity tranonkala manimba. Fa tena lasa lavitra ve ireo zavatra ireo?
Ny ràn’i Kristy dia mandrakotra ny fahotan’ny kristiana, ny taloha, ankehitriny ary ho avy. Midika ve anefa izany fa afaka manao izay tiantsika isika? Ny sasany dia nametraka an'io fanontaniana io rehefa avy nianatra fa ny fahasoavana dia tsy ny mitandrina ny lalàna ihany no misy eo anatrehan'Andriamanitra.
Namaly i Paoly ao amin'ny Romanina 6,1: 2:
Tian'Andriamanitra isika hahita toe-tsaina manome fahasoavana, be fitiavana, ary manome matetika, mihoatra noho izay ilaina. Raha mandia fiainana isika ary manandrana miala amin'ny karazan-javatra rehetra satria ny fahasoavana dia manarona ny zava-drehetra, dia mila fanazavana isika.